Garoonka Diyaaradaha Arland oo lagu Xiray Labo Qof oo lagu qabtay Warqada Corona oo been abuur ah Somali - Wararka Somalida, Caalamka
HomeWararka Maanta SomaliskaGaroonka Diyaaradaha Arland oo lagu Xiray Labo Qof oo lagu qabtay Warqada Corona oo been abuur ah
March 4, 2021 Wararka Maanta Somaliska, Wararka Sweden 0
Xili Dadka ka baxaya Garoonka diyaaradaha Arland looga baahan yahay Warqada tijaabada Corona ayaa dad badan waxay qaataan Warqad cadeen u ah in aysan qabin Xanuunka lakin Warqadaasi ayaa mararka qaar loo sameeyaa qaab been abuur ah ama Fake ah.
Maamulka garoonka Arlanda ayaa xiray labo Qof oo muujiyay khiyaano natiijooyinka baaritaanka Corona. Labadan nin ayaa doonayay inay dalka ka baxaan, waxaana booliska ay xireen iyagoo looga shakisan yahay inay galeen dambiga been abuurka ah.
Wadamo badan ayaa u baahan in dadka safrayaa ay leeyihiin natiijooyin tijaabo oo diidmo ah oo aan ka badnayn 48 saacadood si ay u awoodaan inay soo galaan dalka, sidaa darteed shaqaalaha garoonka diyaaradaha Arlanda waxay hubiyaan ka-soo-galista shahaadooyinka imtixaanka Corona, si loo hubiyo in dadka safarka ah aan dib loogu celin Iswiidhan isla diyaaradda.
Markii ay labada qof isku dayeen inay galaan, shaqaaluhu waxay xaqiijiyeen shahaadooyinka Corona waxayna heleen khiyaano, sidaa darteed waxay markiiba u waceen booliska garoonka. Sida uu soo xigtay TT.
Ma cadda sida shahaadooyinkaasi loogu been abuurtay iyo dalka ay damacsanaayeen inay ku socdaalaan, laakiin waxaa loo xiray tuhun ah inay isticmaaleen dukumenti been abuur ah.
Qiyaastii laba toddobaad, Iswiidhan waxay ku soo rogtay ajaanibta inay muujiyaan natiijo diidmo ah oo aan ka badnayn laba maalmood si ay u awoodaan inay soo galaan waddanka.